Siciid Ilko Jiir waxa uu isku dhuftay Shaambad Fool xun | Somaliland.Org
Siciid Ilko Jiir waxa uu isku dhuftay Shaambad Fool xun
December 28, 2012	Wuu iska baydhiyay eedihii samayska ahaa ee uu alifay hal-abuurka magaciisu yahay Siciid Ilko Jiir oo si yaq-yaqsi leh u hafray awoodana saaray sidii uu mixnad u dhex dhigi lahaa xukuumadda Somaliland Iyo dadweynaha degmadda Axmed Dhagax ee Magaalada Hargeysa oo ah kuwo aan mixnad la dhex dhigi Karin isla markaana xanafta yar ee doorashaddu aanay kala gayn Karin.
Si milgaha dhaqanka suuban ka baxsan ayuu ninkaasi hal abuurka sheegtay uu shabakadda Hadhwanaag ku baahiyay hadal mixnad iyo naxli badnaa oo uu ku doonayay inuu ku kiciyo dadweynaha degmadda Axmed Dhagax isla markaana ka hor keeno xukuumaddii ay iyagu hormuudka ka ahaayeen doorashadeedii 26-kii bishii June 2010-kii.
Siciid Ilko Jiir waxa uu ku dal-dalmay hadalo badan oo uu ku sheegayay in xukuumada Siilaanyo aanay jeclayn dadweynaha reer Axmed Dhagax. Waxa kale oo uu ninkaasi ku dooday in xukuumadu ay sad bursiimo siiso beesha uu isagu ka soo jeedo sidaasi darteedna uu joojiyo hees uu ku caaridayay Madaxweynaha.
Waxa hadalka ninkani uu wis-wis ku abuuray rayul caamka bulshadda oo uu doonayay inuu si khaldan u marin habaabiyo. Hase yeeshee Wasiirka Madaxtooyadda Somaliland Md. Xirsi Cali Xaaji Xasan waxa uu markii uu eegay heerka munaafaqada ninkaasi gaadhay uu waraysi jawaab ah xalay siiyay shabakadda Hadhwanaag news oo warkaasi lagu baahiyay.
Wasiirka Madaxtooyaddu waxa uu ku dhaartay inaanu garanynin, aqoon, arag isla markaana aanu wax telefoon ah u dirin ninkan.waxaana hadaladii Wasiirka ka mid ahaa “Ninkaasi la ii sheegay ee Hadhwanaag ku jira, ma aqaano, mana arag, waxna uma sheegin. Waligayana ma aanu xidhiidhin. Nin aan wajigiisa iyo Telefoonkiisa aqaanana ma aha. Markaa waxa uu sheegay waa war been ah oo aanay waxba ka jirin.”
Hadaba, Wasiirka Madaxtooyadu waxa uu ka hortagay barobagaando aan sal lahayn oo loogu tallo galay in dadka lagu kala fogeeyo. Waayo waxa la yidhi “Afku wuxuu la xoog yahay Magliga xawda kaa Jara”, ama waxa la yidhi “Si Xun wax u sheeg sixir ka daran”.
Si kastaba arrintu ha ahaatee Siciid Ilko jiir waxa uu isku dhuftay shaambad beenaalle waxaanu ka been sheegay masuul qaran oo uu hafray, markaa side ayaa loo aamini karaa shakhsiyadiisa dhiriqda cagaha la gashay.
Hargeysa Post navigation
Previous PostWasiir Xirsi Oo Ka Hadlay Abwaan sheegay inuu la xidhiidhay iyo Mudaharaadkii HargeysaNext PostXaflad Loo sameeyay Dib u magacaabista Badhasaabka Maroodi-jeex oo lagu qabtay Hargeysa	Blog